कर्णालीलाई सजाय नदेऊ ! - Chautari Post Online
कर्णालीलाई सजाय नदेऊ !
May 6, 2019 by Chautari Post Online
कर्णालीलाई सजाय दिएको हैन भने कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि साँच्चै नै ‘विशेष कार्यक्रम’ सुरु गर्नुपर्छ
संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा ‘‘कर्णालीको कष्ट’’ नसमेटिएको गुनासो सत्तारुढ दलकै सांसदले गरेको छन् । उनका अनुसार कर्णालीले खरदार खोजिरहेका बेला संघमा ‘रोजीरोजी मन्त्रालयको सचिव’ छान्ने गरिन्छ । यता ‘ठूला विमानस्थल’को बहस हुन्छ कर्णालीमा साना विमान स्थल र साँगुरा सडक पनि पक्की बनाउन ध्यान दिइँदैन । कर्णालीका विनियोजित बजेट रकमान्तरको सिकार भएजस्तै अनुदानमा दिइने ‘चामल, नुन, औषधि’ पनि बाटोबाटै बिक्री गरिन्छ । कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा बर्सेनि महामारी फैलने गर्छ । सामान्य उपचारबाट निको हुने झाडापखाला वा रुघाखोकी कर्णालीमा महामारी बन्न पुग्छ । उपचार सेवामात्र हैन पोसिलो खानेकुरा र सरसफाइको अभावले महामारीलाई कुनै न कुनैरूपमा दोहोरिई रहन्छ । र, पनि सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली प्रदेश पर्ने गरेको छैन ।
पञ्चायत कालभर कर्णाली अञ्चललाई मुलुकका अरू भेगभन्दा ‘विशेष प्राथमिता’ दिएर विकासको सहज र स्वाभाविक यात्राबाट बाहिरै राखियो । अनुदाने अर्थतन्त्रले कर्णालीको कम्मर भाँचेको कर्णालीवासीले सायद पत्तै पाएनन् । तिब्बतमा अन्न निर्यात गर्ने कर्णाली क्षेत्र भोकमरीको पर्याय बन्न पुग्यो । यातायातको प्रवाहमा जोड्न गतिलो सडक बनाउनुको साटो कुना कन्दरामा ससाना विमान स्थल बनाइयो । ‘विकास बाँडेर खाने’ ठालु र सरकारी कर्मचारीबाहेक अरूका लागि हवाइ मैदानहरू गौचरनमै सीमित भए । लोकतन्त्रपछि कर्णाली क्षेत्रप्रति सरकारको ध्यान त बढ्यो तर कागजमा मात्र । कर्णाली बजेट विनियोजन गरेर जेठ समान्ततिर रकमान्तर गर्ने शीर्षक बन्न पुग्यो । संघीयतामा मुलुकको पुनःसंरचना हुँदा कर्णाली अञ्चल अपेक्षाकृत फराकिलो भएर कर्णाली प्रदेश बन्यो । राज्यको उपेक्षा र वञ्चनामा भने फरक परेन । लाग्छ, कर्णालीवासीले गरेको कुनै अपराधका लागि उनीहरूलाई राज्यले सजाय दिएको छ ।
कर्णाली अपार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । कुनै बेलाको खस साम्राज्य र सभ्यताको उद्गम स्थल कर्णालीलाई नेपाल राज्यले सधैँ नै ठग्दै आएको छ । काठमाडौंको ठगीलाई त्यहीँका ठालुले निरन्तरता दिएका छन् । विकास योजनाको छनोटदेखि निर्माणसम्म कर्णालीले आफैँ निर्णय गर्न पाउँदैन । पाउँदा पनि ठालुहरूले जनताका लागि हैन आआफ्ना सुविधामा विकास खान सजिलो हुनेगरी बाँडचुँड गर्छन् । यसैले कर्णालीका जनताको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नपरेको हो । देशको अरू भेगमा समयसँगै भएको प्रगतिले पनि जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । कर्णालीमा भने समय पनि रोकिएको भान हुन्छ । काठमाडौंमा मुटु फेरिन्छ । कर्णालीमा रुघाखोकी लाग्दा ओखती र खानेकुरा नपाएर ज्यान जान्छ । राज्यले अहिलेसम्म गरेको उपेक्षा र वञ्चनाको सजाय कर्णालीवासीलाई किन ?
काठमाडौंबाट हेटौँडा निस्कने चौथो मोटर बाटो केही महिनाभित्रै खुल्दैछ । सेनाले त्यही भेगमा द्रूतमार्ग बनाउँदैछ । प्रदेशकै एउटैमात्र सडक कर्णाली राजमार्ग भने अहिलेसम्म पनि ‘मृत्युमार्ग’ कै पर्याय बनिरहेको छ । राज्यले कर्णालीवासीसँग गरेको व्यवहारको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त यो पनि हो । कर्णालीका सबै सदरमुकाम बाह्रै महिना मोटर चल्ने सडक सञ्जालमा जोड्न संघ सरकारले एक वर्षमात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने त्यसपछि कर्णालीले विकासको लय आफैँ समात्नेछ । कर्णालीलाई सजाय दिएको हैन भने कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि साँच्चै नै ‘विशेष कार्यक्रम’ सुरु गर्नुपर्छ । देशको एक वर्षको सबै विकास बजेट त्यहीँ खर्च गरे पनि राष्ट्रलाई घाटा हुनेछैन ।बाह्रखरी
Prevसमाजवादी पार्टीमा कसको के पद ?
Nextप्रदीपका लागि हिरोइन खोज्दै सन्तोष